NY FANAMBADIANA MALAGASY - Dinika forum.serasera.org
NY FANAMBADIANA MALAGASY
Fitohizan'ny hafatra : NY FANAMBADIANA MALAGASY
naritsimba - 19/06/2008 12:37
Miarahaba antsika namana rehetra!
Ity dinika soratako eto ity dia nodinihana avy amin'ny fombam-panambadiana Malagasy, fomban'ny fanambadiana ao @ Testamenta Taloha ary ny fanambadiana Kristiana. Asongadina eto kosa anefa ny tena fanambadiana Malagasy.
Teo amintsika Malagasy dia nanana ny fombantsika isika raha ny resaka fanambadiana, lasa resaka lava ilay fanafoanana fanambadiana noho ny tsy naha virijiny intsony ilay vehivavy, fomban-tany io ary isika koa nanana ny fombantsika taloha.
Misy fitenenana ho antsika Malagasy hoe: Ny anambadian-kiterahana, sy ny hoe: ny anambadian-kiadanana.Raha ilay fitenenana voalohany no raisina dia natao ho an'ny mpivady mihitsy ilay izy, izany hoe ny hanana taranaka fara aman-dimby no tanjona. Raha mahamarika isika dia ny vehivavy no voalaza fa tsy miteraka matetika fa momba ary dia afaka mangataka fisarahana ny lehilahy.
Ilay fiteny faharoa indray dia mazava fa: Ny lehilahy no natao hamelona noho izany rehefa tsy mahavelom-bady ilay lehilahy dia manan-jo hangataka fisarahana izy.
Tsy nisy resaka mihitsy teo @ fiaraha-monina malagasy fahiny fa rehefa tsy virjiny ilay vehivavy dia mitaraina ny lehilahy.
Ny antsika malagasy ny tena fomba dia: rehefa hita sy azo antoka fa hanan-taranaka ny mpivady vao atao daholo ny fomba rehetra ahatonga ny lahy sy vavy ho mpivady ara-dalana eo anatrehan'ny fiaraha-monina.
Taorian'ny nidiran'ny fivavahana Kristiana no nahatonga ny Malagasy hitady vehivavy virjiny ho vadiana, na izany aza anefa dia nisaraka ihany ny Malagasy na virjiny aza ny vehivavy vadiany rehefa tsy afaka mifanome taranaka.
Tsy nahalala ny resaka Kristianisma ny malagasy fahiny fa nahalala an'Andriamanitra, satria nahalala ny maha lehibe ny fananana taranaka.
Azontsika jerena ny mikasika an'ny Abrahama izay tsy niteraka:
Citation « [Ny nahaterahan'Isimaela] Ary Saray, vadin'i Abrama, tsy mba niteraka; ary izy nanana mpanompovavy Egyptiana, Hagara no anarany. » (Genesisy 16:1)
« Ary rehefa nonina folo taona teo amin'ny tany Kanana Abrama, dia nalain'i Saray, vadin'i Abrama, Hagara Egyptiana mpanompovaviny, ka nomeny an'i Abrama vadiny mba hovadiny. » (Genesisy 16:3)
« Dia nivady tamin'i Hagara izy, ka nanan'anaka ravehivavy; ary rehefa hitany fa efa manan'anaka izy, dia nataony toy ny tsinontsinona ny tompovaviny. » (Genesisy 16:4)
« Ary hoy Abrama tamin'i Saray: Indro, eo an-tananao ihany ny mpanompovavinao; ataovy aminy izay sitraponao. Ary raha nampahorin'i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy. » (Genesisy 16:6)
« Ary hoy Izy: Ry Hagara, andevovavin'i Saray, avy taiza ianao? Ary hankaiza? Ary hoy izy; Mandositra ny tavan'i Saray tompovaviko aho. » (Genesisy 16:8)
« Ary Hagara nanao ny anaran'i Jehovah, Izay niteny taminy hoe: Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Tsy teto va no mbola velona aho aorian'ny fahitana? » (Genesisy 16:13)
« Ary Hagara dia niteraka zazalahy tamin'i Abrama; ary ny anaran'ny zanany izay naterany dia nataon'i Abrama hoe Isimaela. » (Genesisy 16:15)
« Ary efa enina amby valo-polo taona Abrama, raha Hagara niteraka an'Isimaela taminy. » (Genesisy 16:16)
I Saraha vadin'i Abrahama mihitsy no nanaiky ny hiterahan'i Abrahama t@ mpanompony. Toy izay koa ny fombantsika malagasy. Taty aoriana rehefa tonga ny fandrosoana, dia nahita indray ny malagasy fa tsy voatery ny vehivavy ihany no momba fa mety ho ny lehilahy ihany koa, dia niova araka izay koa ny fijerin'ny fiaraha-monina, ary dia niova koa ny foto-pisainana.
Ny fombantsika malagasy aza dia nisy ny fiteny hoe Vadin'ny marolahy, izany hoe eo @ fotoana hanatanterahana ny fanambadiana t@ andro fahiny dia efa hifanarahan'ny fianakaviana anankiroa fa raha sanatria misy ny fahafatesan-dralehilahy dia tsy mahazo manambady olon-kafa ilay vehivavy fa tsy maintsy ny iray tampo @ ilay lehilahy no vadiny na raha tsy manana izy dia izay lehilahy vonona ny hanambady azy ao anatin'ilay fianakaviam-badiny teo aloha no tsy maintsy vadiany, tsy mipetraka mihitsy eto ny resaka virjiny.
Ho antsika Malagasy izany dia ny taranaka no fototry ny fanambadiana, voalohan-karena ny zanaka, manaraka izay ny fananana harena hiadanana; ary avy amin'izay ny hoe tokantrano.
Tsy tokony hivady ny malagasy raha tsy azo antoka fa hitokantrano rehefa manambady, tsy toy ny @ izao fotoana hoe mitokan'efitra.
Manana adidy lehibe @ izany ny Ray aman-dreny @ fahafahan'ny zanany mitokantrano rehefa tsapany fa tokony hanambady, indrindra ny zanaka lahy.
Citation ]« Trano sy harena no lova avy amin'ny ray; Fa ny vady hendry kosa dia avy amin'i Jehovah. » (Ohabolana 19:14)
Raha fakafakaina izany ny fifandraisan'ny fanambadiana tena malagasy sy ny fanambadiana kristiana ary ny fanambadiana tany amboalohany voalaza ao @ Testamenta taloha dia hita fa:
-Nahalala an'Andriamanitra ny Malagasy.
-Nahalala ny hasarobidin'ny taranaka ny Malagasy.
-Nahalala ny halehiben'ny atao hoe tokantrano ny Malagasy( ny hava-tiana tsy iaraha-monina) na mbola tsy tonga teto aza ny Kristianisma.
1-Amiko na virjiny na tsy virjiny ny vehivavy dia tsy sakana tsy hanambadiana azy izany rehefa tena misy ny fitiavana raha ny fombantsika Malagasy no dinihana.
2-Samy manana ny lalanany sy ny fombany ny firenena tsirairay ka aza maika hanaraka ny fomban'ny hafa, fa tsara lavitra noho ireny ny fombantsika.
ni81 - 19/06/2008 15:04
Citation Misy fitenenana ho antsika Malagasy hoe: Ny anambadian-kiterahana, sy ny hoe: ny anambadian-kiadanana.Raha ilay fitenenana voalohany no raisina dia natao ho an'ny mpivady mihitsy ilay izy, izany hoe ny hanana taranaka fara aman-dimby no tanjona. Raha mahamarika isika dia ny vehivavy no voalaza fa tsy miteraka matetika fa momba ary dia afaka mangataka fisarahana ny lehilahy
Tsy dia mitombina loatra io lazainao io hoe ny vehivavy no voalaza fa tsy miteraka matetika...
naritsimba - 19/06/2008 15:21
ni81>> Nolazaiko mazava tsara fa fanambadiana t@ malagasy no resahiko ary t@ fomba teo aloha fa tsy @ izao fotoana. Tsy mamaky tsara ny fanazavana ianao fa izay hevitra mety mahaliana anao ihany io novalianao io. Ny fanambadiana teo @ Malagasy @ ankapobeny no resahiko eto an!
naritsimba - 19/06/2008 15:41
Nolazaiko mazava tsara fa teo aloha dia ny vehivavy no voalaza fa momba rehefa misy ny tsy 'ny mpivady, azo atao tsara ny manamarina izany.
Taty aoriana vao nanaiky fa misy koa ny lehilahy tsy miteraka.
Ho tohin'ny resaka tery aloha dia ampiako ny fanazavana.
Tsy misy amin'izao fotoana tahotra na henatra ny ray aman-dreny eo @ fiarahan'ny tanora anakiroa fa matetika dia efa vita any ambadika any izay natao vao ampahafantarina ny ray aman-dreny ny fiarahan'ny tanora roa.
Aoka anefa ho tsapantsika fa tsy haitraitra na filam-baniny ny ataon'ny ray aman-dreny raha sarotiny @ zanany izy, na io zanakalahy na io zanakavavy satria taranany ireny ary sarobidy aminy.
Izay tsy fanomezana haja ny ray aman-dreny izay matetika dia lasa fanambadiana tsy fidiny no misy satria efa bevohoka any ilay zazavavy dia tsy maintsy atao izay hivadiany ka anaovana ny soratra sy ny mariazy. Azo natao tsara anefa ny nampahafantatra ireo ray aman-dreny ny fiarahana misy eo @ tanora anankiroa, ka na misy aza ny trangan-javatra miseho tsy misy olana intsony aoriana. Izay tsy fanajana ny ray aman-dreny izay dia tsy hoe nanao foana ireo ray aman-dreny teo aloha na ireo zokiolona, na tsy nahalala ny Soratra Masina ihany koa aza ny olona taloha dia nifanaraka t@ izay voalaza ao anaty Baiboly izay ny fisainana Malagasy ary amafisin'ireto andinin-tsoratra masina ireto:
« Mitsangàna raha eo anatrehan'ny fotsy volo ianao, ka manajà ny tavan'ny anti-panahy, ary matahora an'Andriamanitrao: Izaho no Jehovah. » (Levitikosy 19:32)
« Manajà ny rainao sy ny reninao, araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao, mba ho maro andro ianao, ary mba hahita soa any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao ho anao. » (Deotoronomia 5:16)
« Fa Andriamanitra efa nanao hoe: Manajà ny rainao sy ny reninao (Eks. 20. 12), ary koa: Izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa (Eks. 21. 17). » (Matio 15:4)
« Manajà ny ray sy ny reninao (fa izany no didy voalohany misy teny fikasana), » (Efesiana 6:2)
Firy @ olona milaza ho Kristiana moa no mahatanteraka ireo voalaza ireo? Efa hatrany @ nahariana antsika Andriamanitra no nitaky ny fanajana ny Ray aman-dreny.
Nisy taloha ny atao hoe vady andrana, hifampieran'ny fianakaviana anankiroa izy io ka alohan'ny hanatanterahana ny fanambadiana dia asaina mitokantrano izy roa hivady, mandritra izay fotoana izay raha toa ka tsy mitoe-jaza ilay vehivavy dia mifampi-tsodrano izy roa ka misaraka. Mazava ho azy arak'izany fa tsy virjiny intsony ilay vehivavy.
Maro ny tanora malagasy izay manarak'efa fotsiny sisa @ fombam-panambadiana malagasy, nefa tadidio fa na ny fomban'ny fanambadiana malagasy na ny fanaovana mariazy ara-pomba kristiana dia tena mifanaraka fa tsy araka ny fiheveran'ny sasany azy fa lany andro ny fomba malagasy.
Tsy lany andro velively akory isika, fa maika te hanaraka ny fomban'ny hafa fotsiny.
naritsimba - 19/06/2008 15:55
ni81>> aza-fady fa tsy ampy ilay nosoratako tesy ambony.
Citation Nolazaiko mazava tsara fa teo aloha dia ny vehivavy no voalaza fa momba rehefa misy ny tsy fiterahan'ny mpivady, azo atao tsara ny manamarina izany.
sakaizakely - 19/06/2008 17:36
Citation Tsy misy amin'izao fotoana tahotra na henatra ny ray aman-dreny eo @ fiarahan'ny tanora anakiroa fa matetika dia efa vita any ambadika any izay natao vao ampahafantarina ny ray aman-dreny ny fiarahan'ny tanora roa.
tsy hoe tsy misy tahotra sy henatra, fa nahoana no tsy maintsy ho lazaina am RAD ze atao rehetra, manana zo hanana ny fiainany manokana (intimité) koa ny ankizy. Zanaka = olombelona toa anao ary midika fa adidy @ fanabeazana no anjaranao aminy, fa ny zanaka tsy midika hoe fanananao (objet) ka hanananao fahefana dia iny hianao no andeha hibaikobaiko azy foana.
Citation Izay tsy fanomezana haja ny ray aman-dreny izay matetika dia lasa fanambadiana tsy fidiny no misy satria efa bevohoka any ilay zazavavy
Citation Azo natao tsara anefa ny nampahafantatra ireo ray aman-dreny ny fiarahana misy eo @ tanora anankiroa,
metody contraceptif mahomby ve io ?
raha ampahalalaina ny tanora ny zavamisy am fiarahan'ny lahy sy vavy dia tsy hitetateta hanandrankandrampoana any ambadimbadika any izy. Tezao ny zanaka lahy hanao kapoty, tezao ny zanaka vavy hanery ny lhl hanao kapoty, de zay fotsiny no fanafodiny fa tsy misy tanora hoterena tsy hanao andrankandrana izany intsony. Aleo misoroka mialoha toy izay hitomany ny andro fahagola tsy hiverina intsony
Ny fanajàna RaD dia ilàna fampianarana miandalana dieny mbola kely ny ankizy, na vao zazamena aza dia tokony atao fahazarana ny azafady, fa izay hitan'ny ankizy aminao ihany no averiny aminao. Raha tsy mahay manaja RAD ny ankizy, dia tokony ho tonga saina koa izy ireo fa nisy lesoka tam fampianarany io taranja io, fa tsy ny tanora foana no omena tsiny
Ny RAD matetika zatra mpanao didy jadona na be morale lavareny fotsiny de tsy de mahagaga loatra raha tsy mahate hanaja fa ihodinan'ny fon'ny ankizy, aleony manatona ny tanora mitovy taona aminy compréhensifs mahatsapa tsara ny ao ampony
haritianah - 19/06/2008 17:38
namaky ny lazainao ao ry naritsimba dia afangaronao ny fomba maha Malagasy sy ny fomba fiteny na ny oha-pitenenanana Malagasy.
Ny fomba maha Malagasy angamba raha ny fahazoako azy dia mizara roa ao ny fomba sasany izay iraisany gasy rehetra fa ao kosa ny fomba maha Malagasy izay samy manana ny azy isika isam-paritra na isa poko angamba.
Ny mety @ faritra hafa ts mety @ faritra hafa.Samy manana ny fomba ny niaviny io na samy gasy.
Aqmiko dia oha pitenenana ilay oé "Ny anambadia kiterahana" fa tsy fomba maha gasy.Nisy ireo Ntaolontsika talou LEHILAHY ts niteraka.Efa hatrany amboalohany efa nahalala fa misy ny lahy ts miteraka ary misy koa ny vavay ts miteraka saingy raha ny taux no ampitahana dia ny any vehivavy no azo lazaina fa betsaka ka lasa adino fa misy koa ny lehilahy momba.Ary maztetika adino tanteraka ny momba io lahy momba io fa ts oé ts nahalala ny gasy talou.
Nilaza ianao fa fomba maha gasy koa ny oé Vadin'ny Marolahy, laviko tanteraka izany ts fomba maha gasy io fa nisy foko tao anatin'ny Malagasy sy faritra no nakasitraka an'io ary napiatra an'io fa ts ny MALAGASY REHETRA.Tsy fomba malagasy rehetra io fa nisy tao anatin'ny Malagasy nanao an'io.
Ny antsika Malagasy angamba tsy nanana fomba mahamalagasy mamaritra fa ts mazo manambady raha ts virjiny fa isika kosa nitaiza ary nampahafantatra ny taranaka na araka ny fanananarana io na araka ny fivavahana io fa ny tsara sy tokony hatao dia Tsy misy firaisana alohany fanambadiana.Fahendrena sy fahasalamana ary fivavahana no nakana izany.
Fomba nhy faritra koa ilay lazainao oé vady andrana fats fomba maha malagasy.
Amiko ny atao oé fomba MAHA MALAGASY dia fomba ekeny faritra 6 manerana ny madagascar ekena fa ts oé fomba fanaony faritra iray de lazaina oé fomba gasy.
Ohatra: refa misy maty de Milaza tsara isika fa fomba MALAGASY izay ita fa tsy nisy naharatsy azy. Io dia na ho aiza manerana ny Madagasikara dia manao an'(io daolo donc zany fomba maha malagasy io.
haritianah - 19/06/2008 17:50
Tsara ho fantatra koa anie ry naritsimba ekena fa nisy ireo fomba nataon'ny RAD teo alou izay nifandimbiasan'ny taraka taty aoriana fa kosa iaraha maita fa ny fiainan'ny zanak'olombelona dia ts mitsahatra ny miova sy mivoatra nefa ny RAD dia misy minia ts té hahalala sy hahafantatra an'izany fa miziriziry @ nahazatra azy atram zay.
Ekeko fa ny zaza ankehitriny tena misy mahasahy maniratsira RAD fa nefa kosa tsra avoaka ihany koa fa ny RAD misy de rigide bé koa dé samy mienjana ny tady.
Tsd itovy mits ny nitaizana ny RAD teo alou sy ny itaizany ny zanany, indrindra fa ny fomba fisainana.Omeko ohatra fotsiny ianao; zahay notezainy RAD ts mazo mandoko volo sy manao vernis à ongles mits na dia efa nanambady aza zahay zanany vavy fa MAKORELINA oy izy ny manao an'izany ka raha té ho zananay sy té hamangy azy dia tsy ilainy manao an'ireo.
Dé zahay alou ts dakoro @ lé lazainy ary iaraha maita ny fomba fijeriny izay diso fa ts nanao an'ireo fotsiny zahay zanany mba ts hampaharary fo azy satria nanano tena izy nanalehibé anay dia ts tia anomé aretimpo azy fotsiny.Fa raha zaza ankehitriny ts té hahalala izany dé ilaza ianao fa maniratsira RAD vé lé zaza ankehitriny raha anao izany??
sakaizakely - 19/06/2008 17:50
tsetsatsetsa tsy aritro : fomba malagasy - mahamalagasy sns
ny fivavahana kristiana dia tsy dorizin tany amntsika fa nentin'ny vaza ary noraisina tsara de nolazaina fa tsara ary ankehitriny dia henatra ho an'ny malagasy raha tsy manaraka io fomba nentimbazaha io
ankehitriny ny tanora dia azo atao hoe manary tsikelikely raha tsy efa very tanteraka aza ny fomba malagasy, fa lasa manaraka izao fanaon'ny vazah rehetra izao, na fihira, na fihetsika, na fiteny, na fombafomba, na fitafy
otran'ny nataon'ny teo aloha mikasika ny fivavahana ihany, fa rehefa ny tanora dia lazaina fa tsy fanajana
ary ahoana ny amin'ireo olona taloha, mety mba kivy koa ry zareo fa narina ny fomba fivavahana, fanompoantsampy fa naleon'ny tanora nanaraka ny fivavahambazaha, nisy dia nanaiky ho vonoina nohony fivavahambazaha mihitsy; mbola tsy azoko koa
haritianah - 19/06/2008 18:18
Marina ny lazainao ry sakaizakely, vokatry ny fivoarann'ny taonjato misy sy iainana no ivoaran'ny fiainan'ny zanak'olombelona ka tokony ho souple ny RAD misy eo isaky ny vanimpotoana misy.
Mampifanenjana ny tady mants ny RAD mitana ny talou t@ époque niainany ny zaza maneo kou ny vanimpotoana misy.Ny maharavona izany dia fahaizany RAD koa miresaka sy mampifandray ny tadidokangany @ tadidokangany zanany.Fa raha iziriziry dia ts hisy zvtr vanona.
Milaza tokoa isika zao fa ny fitsaboana olona @ ravikazo dia isan'ireny fanompoantsapy ireny nefa ireny no nitsboan'ny Ntaolo talou. Fa refa tafiditra t@ fivavahana kristianina isika dia nanaratsy tanteraka ny fitsaboana @ alalan'ny ravinkazo.
rebeccaF - 19/06/2008 18:43
Ilay hoe: Fomba malagasy lazain'i naritsimba dia tokony faritany mazava tsara hoe: faratra aiza ao Madagasikara no lazainy. Fa raha fanambadina amin'ny fomba malagasy no asina resaka dia vao ny 10 isan-jatony io voalazanao io.
Tiako marihana koa fa misy ny Malagasy nitandro ny fahavirijinina nialohan'ny fanambadina, indrindra ny tao anivon-tany. Isany henatra ho an'ny Ray aman-dreny ny vehivavy tsy virijiny intsony mialohan'ny fanambadina.
Amin'ny faritra sasany kosa dia tsy mba miraharaha izany. Amin'iny faritra atsimon'ny Nosy iny ohatra, dia tsy mahazo vady ny vehivavy raha tsy miteraka.
Fanamarihana kely fotsiny ireo
rebeccaF - 19/06/2008 19:18
sakaizakely tsy hoe tsy misy tahotra sy henatra, fa nahoana no tsy maintsy ho lazaina am RAD ze atao rehetra, manana zo hanana ny fiainany manokana (intimité) koa ny ankizy.
Ilay voambolana ampiasainao hoe: ANKIZY dia efa milaza zavatra be dia be. Midika io fa na dia manan-jo hanana ny fiainany manokana aza izy dia tsy mbola manana ny capacité ampy hitondrany mantolo ny fiainany. Ny filazana amin'ny ray aman-dreny izay atao dia tsy midika velively ho tsy fanomezana azy ny ZO tokony hananany. Ny mifanohitra amin'izany aza no tokony ho izy dia ny hoe: mbola manan-jo ny hiankina amin'ny ray aman-dreniny izy amin'ny maha ANKIZY azy ( = mila ny toro-hevitra avy amin'ny ray aman-dreny).
sakaizakely Zanaka = olombelona toa anao ary midika fa adidy @ fanabeazana no anjaranao aminy, fa ny zanaka tsy midika hoe fanananao (objet) ka hanananao fahefana dia iny hianao no andeha hibaikobaiko azy foana.
Ny zanaka sy ny ray aman-dreny amiko dia MPINAMANA. Ary tokony hisy INTIMITE mandrakariva eo aminy. Ny filazana izay atao amin'ny ray aman-dreny dia tsy midika fa toy ny objet ny tena eo anatrehan'ny ray aman-dreny. Ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka koa dia tokony hiova arakaraky ny taonan'ilay zanany: raha mbla zaza izy, toro-lalana sy fananarana no atao; raha efa tanora kosa dia: dialogue no tokony hatao. Misy fampihenoana bebe kokoa.
Fehiny: Ilaina amiko ny mizara ny zavatra atao amin'ny ray aman-dreny na inona izany na inona.
sakaizakely raha ampahalalaina ny tanora ny zavamisy am fiarahan'ny lahy sy vavy dia tsy hitetateta hanandrankandrampoana any ambadimbadika any izy.
Miombon-kevitra aminao aho amin'ity resaka iray ity. Ary io dia mbola manamafy fa mila mifampiresaka sy mifampiheno mandrakariva ny ray aman-dreny sy ny zanaka.
sakaizakely Tezao ny zanaka lahy hanao kapoty, tezao ny zanaka vavy hanery ny lhl hanao kapoty, de zay fotsiny no fanafodiny fa tsy misy tanora hoterena tsy hanao andrankandrana izany intsony. Aleo misoroka mialoha toy izay hitomany ny andro fahagola tsy hiverina intsony
Tsy vahaolana velively ny fitaizana ny zanaka hampiasa kapoty. Amiko io dia famporisihana azy hanaonao foana. Ary vao maika aza hanimba azy sy ny ho aviny. Hamolavola azy tsy ho tompon' andraikitra fa ho zary toy ny akolahim-bohitra, sy ho zary basin'ariary fito (ny vavy).
sakaizakely tsy ny tanora foana no omena tsiny
Tsy ny Ray aman-dreny foana koa no omena tsiny!
naritsimba - 20/06/2008 08:01
Citation Ny mety @ faritra hafa ts mety @ faritra hafa.Samy manana ny fomba ny niaviny io na samy gasy.
Aqmiko dia oha pitenenana ilay oé \_"Ny anambadia kiterahana\_" fa tsy fomba maha gasy.
Citation Tiako marihana koa fa misy ny Malagasy nitandro ny fahavirijinina nialohan\_'ny fanambadina, indrindra ny tao anivon-tany. Isany henatra ho an\_'ny Ray aman-dreny ny vehivavy tsy virijiny intsony mialohan\_'ny fanambadina.
Amin\_'ny faritra sasany kosa dia tsy mba miraharaha izany. Amin\_'iny faritra atsimon\_'ny Nosy iny ohatra, dia tsy mahazo vady ny vehivavy raha tsy miteraka.
Efa hitako daholo ny ankabeazan\_'ny faritra eto Madagasikara, ary itovizan\_'ny faritra rehetra ny hoe :
Citation Ny anambadian-kiterahana[/quote.
hoy ihany i haritianah:
Citation Nilaza ianao fa fomba maha gasy koa ny oé Vadin\_'ny Marolahy, laviko tanteraka izany ts fomba maha gasy io fa nisy foko tao anatin\_'ny Malagasy sy faritra no nakasitraka an\_'io ary napiatra an\_'io fa ts ny MALAGASY REHETRA.Tsy fomba malagasy rehetra io fa nisy tao anatin\_'ny Malagasy nanao an\_'io.
Ny antsika Malagasy angamba tsy nanana fomba mahamalagasy mamaritra fa ts mazo manambady raha ts virjiny fa isika kosa nitaiza ary nampahafantatra ny taranaka na araka ny fanananarana io na araka ny fivavahana io fa ny tsara sy tokony hatao dia Tsy misy firaisana alohany fanambadiana
Maro ny boky mitantara io atao hoe vadin\_'ny marolahy io, misy koa ny hoe vady lova, ny fomba filaza azy dia ekeko fa fomba fiteny avy eto afovoan-tany fa samy nanana ny fomba nilazany azy ny foko sasany na ny faritra sasany, fa ny fanatanterahana azy dia nitovizan\_'ny faritra rehetra noho ny resaka fandovana no tena nahatonga izany.
Ny maha virjiny na tsia ny vehivavy, dia vao taty aoriana t@ fotoana nahalalana ny fivavahana Kristiana.
mbola i haritianah ihany:
Citation Amiko ny atao oé fomba MAHA MALAGASY dia fomba ekeny faritra 6 manerana ny madagascar ekena fa ts oé fomba fanaony faritra iray de lazaina oé fomba gasy.
Raha lasa faritra 22 ilay faritany 6 teo aloha @ izao fotoana, na koa ny foko 18, dia sahiko ny milaza fa ny 22 @ faritra 22, ny 6 @ faritany 6 teo aloha ary ny 18 @ ireo foko 18 ireo dia samy nanana ny mpanjaka, na ny ampanjaka, na ny tangalamena, na izay fomba filaza azy. Ireny no mpitondra ny fiaraha-monina, mbola misy izany ankehitriny, ireny no nanao ny lalanan\_'ny fiaraha-monina. Ireo fomba nolazaiko ireo dia @ fanambadiana satria izay no lohatenin\_'ny dinika, ary ny fombam-panambadiana teto madagasikara dia nitovizan\_'ny rehetra dia ny fanateram-bodiondry aty afovoan-tany, fa hafa ny fiantso azy isaky ny faritra. Raha raisina fotsiny io fanateram-bodiondry io dia azo ampifandraisina avy hatrany @ izay voalaza momba an\_'i Jakoba izay nanompo ny rafozany 7 taona in-droa vao nahazo ilay tena tiany ho vadiana.
Raha dinihana izany na mbola tsy nahalala ny Soratra Masina aza ny Malagasy dia nanana ny naha-izy azy teo @ fombam-panambadiana.
Ny tena tiana ampitaina dia hoe: Tsara ny fombantsika Malagasy teo @ resaka fanambadiana, fa tsy ratsy velively ary koa tsy lany andro.
Ny zava-misy dia lazaina lany andro ny nataon\_'ireo Ray aman-dreny teo aloha, ekeko fa tsy tonga lafatra 100% izy ireny, nefa kosa ekeko 90% ny fomba nitaizany sy nitondrany ny zanany.
Amiko tsy ilaina ny kapôty, fa ny fifehezan-tena no tena zava-dehibe.
Raha vao miresaka fanambadiana ny ray aman-dreny @ izao fotoana dia sahin\_'ny sasany ny milaza fa fomba efa lany andro izany fomba ratsy izany, nefa aoka ho tsapantsika fa nisy zava-dehibe napetrak\_'ireo RAD teo aloha.
Ny trangan-javatra miseho ary iainana @ izao fotoana dia: t@ fotoana izay nanambadian\_'ny RAD @ izao fotoana ange dia nanana ny filazany koa izy ireo t@ Ray aman-dreniny saingy nony tonga ny fotoana anambadian\_'ny zanany ankehitriny dia mbola milaza sy mitantara ny zavatra nahazo azy t@ andro nanambadiany izy, ary tsy milaza ireny ho ratsy mihitsy, izany dia mazava fa ny ankamaroan\_'ny @ izao fotoana dia fitiavana te hanohitra fotsiny ihany sy te hanaraka ny fomba izay tsy mety fa rehefa tonga eo @ toeran\_'ny RAD dia ny teo aloha ihany no arahina.
Manana anabavy anankiroa aho fa tsy misy mitevika izy ireo na iray aza satria tsy navelan\_'ny Dada sy Neninay hitevika, nanana ny heviny izy t@ izany, ka tsy idirako lalina, ary dia mbola tazoninay izany @ ireo zafikeliny vavy nefa kosa tsy manery izahay.
Firy moa no milaza tsy sarotiny ankehitriny @ zanany rehefa hanambady izy ireny? ary moa tsy ny nataon\_'ny teo aloha no ataony ankehitriny?
Averiko indray fa:raha ireo hevitra ireo no raisina dia tsy nivaona t@ fombam-panambadiana voalaza ao @ Soratra Masina ny fombam-panambadiana Malagasy tany aloha ary tsy misy maharatsy azy mihitsy.
naritsimba - 20/06/2008 08:15
Fitiavana te hanandrakandrana no betsaka @ tanora ankehitriny noho ny fahitana ny ataon'ireo avy any ivelany.
naritsimba - 20/06/2008 08:52
Citation Marina ny lazainao ry sakaizakely, vokatry ny fivoarann'ny taonjato misy sy iainana no ivoaran'ny fiainan'ny zanak'olombelona ka tokony ho souple ny RAD misy eo isaky ny vanimpotoana misy.
Ny filazana hoe ratsy ny fitsaboana @ ravin-kazo dia vokatry ny fandikana vilana ary nentina nandemena ny sain'ny Malagasy. Ny fomba nampiasan'ny sasany azy no ratsy satria nentina nanaovana ratsy dia izay no tafalentika ao an-tsain'ny Malagasy nandray an-tendrony. Toy izay koa ny fanambadiana, tsy nety t@ ireo izay te hanaraka ny fandrosoana ny nataon'ny teo aloha dia nolazaina fa ratsy, kanefa nony hiarany izy dia malaky miova hevitra. Tsy nety t@ foto-pisainana malagasy ny fanambadian'ny samy lehilahy sy ny samy vehivavy nefa ankehitriny toa tsy henatra intsony @ Malagasy ny miseho imasom-bahoaka(sarim-bavy tena izy).
Atao ahoana moa fa izay ilay fandrosoana eh????
fahamarinana - 20/06/2008 09:09
naritsimba Atao ahoana moa fa izay ilay fandrosoana eh????
:arrow: Ny tsy azoko dia ailika amin'ny fandrosoana daholo izay tsy mety rehetra...
naritsimba Fitiavana te hanandrakandrana no betsaka @ tanora ankehitriny noho ny fahitana ny ataon'ireo avy any ivelany
:arrow: Ailika amin'ny ilay hoe any ivelany sns...sns...
Fa ny olona ve zany koa ketrina raha ireo voalazanao ireo no jerena ?
Angamba samy responsable ny tenany aloha dia ianao no tompon'ny tenanao fa tsy sanatria misy mivaona na mibolila dia hoe ka zao,ka ny fandrosoana,...Tsy misy olona voatery manaraka ny fandrosoana ary mbola misy any amintsika mitandro sy miaina izany.
Ary ny Fandrosoana lazainao tsy voatery koa ratsy daholo fa ny fomba fandraisan'ny tsi 11 sy ny fampiasany azy io.
naritsimba Tsy nety t@ foto-pisainana malagasy ny fanambadian'ny samy lehilahy sy ny samy vehivavy nefa ankehitriny toa tsy henatra intsony @ Malagasy ny miseho imasom-bahoaka(sarim-bavy tena izy).
:arrow: Tsy voatery ny gasy irery fa na hafa fiaviana aza.Ary na tamin'izany aza dia nisy fa tsy nibaribary fa niafina satria naha-menatra tokoa ve ?,ny tiako lazaina hoe tsy hoe ankehitriny noho ny "fandrosoana moa " dia niha-betsaka.
Soa ianao tsy sarimbavy dia misaora fa ny fiainan'ireny olona ireny koa anie mafy e,misy angamba ny manao mody sarim-bavy fa misy koa tena izay ny toetenany,na henatra tsy misy na misy,na inona antony.Sans commentaires de plus fa dinika hafa ndray zay manko..lasa mifangaro ndray dia hivaona ity resaka fanambadiana e!! (l)
naritsimba - 20/06/2008 10:43
Ny zavatra ampiataiko ry fahamarinana raha somary alalinina dia ny hoe: Nanao ahoana ny fanambadiana malagasy taloha sy ny ankehitriny.
Tsy milaza aho hoe: ratsy ny fandrosoana, fa tena marina ilay voalazanao fa :
Citation Ny tsy azoko dia ailika amin\_'ny fandrosoana daholo izay tsy mety rehetra...
sy ilay hoe:
Citation Angamba samy responsable ny tenany aloha dia ianao no tompon\_'ny tenanao fa tsy sanatria misy mivaona na mibolila dia hoe ka zao,ka ny fandrosoana,...Tsy misy olona voatery manaraka ny fandrosoana ary mbola misy any amintsika mitandro sy miaina izany.
Ary ny Fandrosoana lazainao tsy voatery koa ratsy daholo fa ny fomba fandraisan\_'ny tsi 11 sy ny fampiasany azy io.
Tena marina ny voalazanao.
Ny mikasika ny sarim-bavy indray, na mafy aza ny mahazo azy ireny dia tokony ho anjaran\_'izy ireny ny miezaka hiala @ ilay toetra misy azy.Ekeko fa efa voasoratra ny fiainantsika tsirairay avy fa ilàna ezaka avy @ tsirairay izany.
Inoako fa iarahantsika manaiky fa avy @ fandrosoana ny kapôty, ny fanalan-jaza, sns...! izany dia vokatry ny fisian\_'ny firaisana tsy ao anatin\_'ny fanambadiana ka azo nosorohana na azo atao ny tsy mampitombo azy toy ny misy @ izao fotoana, raha toa ka manaiky isika fa alohan\_'ny hanaovana sipa dia ekentsika ny hisian\_'ny fifampiresahana eo @ RAD sy zanaka. Ny olana mantsy dia ny fanapepoana ataon\_'ny RAD ny zanany avy hatrany raha vao miresaka sipa ny zanaka, indrindra fa ny zanaka vavy.
Ho ahy manokana satria aho manana zanaka vavy dia zava-tsy mahamenatra ahy ny miresaka izany. Ampahafantariko azy ny tokony sy tsy tokony atao, ny firesahana dia midika fampahafantarana ny tokony ataony, ary adidin\_'ny RAD izany. Ny zava-misy koa dia ireo RAD manaonao foana na miteniteny foana eo imason\_'ny zanany ka menatra ny hiteny avy eo.
fahamarinana - 20/06/2008 11:52
naritsimba Inoako fa iarahantsika manaiky fa avy @ fandrosoana ny kapôty, ny fanalan-jaza, sns...! izany dia vokatry ny fisian'ny firaisana tsy ao anatin'ny fanambadiana ka azo nosorohana na azo atao ny tsy mampitombo azy toy ny misy @ izao fotoana
:arrow: Tsy voatery hoe mbola mpisipa na tsy ao anaty fanambadiana dia mampiasa an'ireo anie ry naritsimba e fa mety fiarovana toa ny fiarovana rehetra ihany .Misy tokoa na manambady aza dia mampiasa satria oh tsy mahazaka telle contraception sns...
naritsimba Ny mikasika ny sarim-bavy indray, na mafy aza ny mahazo azy ireny dia tokony ho anjaran'izy ireny ny miezaka hiala @ ilay toetra misy azy
:arrow: ny tiako tenenina dia aleo izay tena ao anatiny no tena handalina ny tokony ataony.Moramora ho antsika tsy concernés no miteny hoe zao atao na zao no tsy maintsy atao na inona.Amiko tsy toetra no mahatonga ireny tranga ireny ka hoe azo ialana.Amiko manokana fa mety ho diso aho,asa anefa...
naritsimba Ho ahy manokana satria aho manana zanaka vavy dia zava-tsy mahamenatra ahy ny miresaka izany. Ampahafantariko azy ny tokony sy tsy tokony atao, ny firesahana dia midika fampahafantarana ny tokony ataony, ary adidin'ny RAD izany. Ny zava-misy koa dia ireo RAD manaonao foana na miteniteny foana eo imason'ny zanany ka menatra ny hiteny avy eo.
:arrow: Miombon-kevitra aminao aho eto indray kah,tsy misy anampiako,tsy misy analako.Ny ahy ndray lahy ary adidintsika no manome infos ny zanatsika fa kosa arakaraka ny taonany no hamaliana azy.Amin'izao fotoana zao manko efa be ny aretina ary mahafaty ka aleo misoroka toy izay manenina.Nefa ekena fa sarotra tanteraka ny role-ntsika RAR...mino aho fa miezaka daholo... (l)
ari.malala - 20/06/2008 12:54
naritsimba Inoako fa iarahantsika manaiky fa avy @ fandrosoana ny kapôty, ny fanalan-jaza, sns..
tena avy am fandrosoana tokoa v ny fanalana zaza?? fa ts efa hatramizay v no nisy ny renin-jaza izay natonina fahiny rehefa tsy te hitazaona zaza ny vehivavy? aza ahilika am fandrosoana daolo io rehetra io!
fahamarinana - 20/06/2008 13:00
:arrow: miombon-kevitra amin'ny ari koa aho eto,taloha aza maty hatramin'ny reniny satria naha-menatra izany ,debats hafa ndray moa zay fa dia ajanoko eo. (l)